देउवाको चौतर्फी आलोचना, इटा भट्टामा देउवालाई सेका’उन कांग्रेस कार्यकर्ताको माग – Khabar Silo
काठमाडौ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १२ वर्षअघिको ह’त्या आरो’पमा प’क्राउ परेका पार्टीका सांसद मोहम्मद अफताब आलमको बचाउ गरेको भन्दै काग्रेस कार्यकर्ताहरु रुष्ट बनेका छन ।
अप*राधलाई बचाउन खोजेको भन्दै आफ्नै पार्टी सभापतिको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको हो । सुनसरीका काग्रेस कार्यकर्ता रामबहादुर कार्कीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन शेरबहादुर देउवाले मोह्मद अफताब आलमकै पक्रा*उलाई इंकित गरी अभिब्यक्ति दिएको हैन होला,नहोस यदि हो भने अव इटा पो*ल्ने सिजन सुरु हुदैछ इटा भट्टाको तातो चिम्निमा देउवाजीलाई एक पटक से’काएर हेरौ कस्तो हुन्छ ।
म पनि काग्रेस हो अप*राधलाई ढाकछोप गर्ने विचारको पक्षमा छैन । पुरानो मुद्दा ब्युँताएर आलमलाई पक्रा*उ गरिएको भन्दै देउवा सरकारविरुद्ध आक्रामक बने सँगै कार्यकर्ताहरु देउवाको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा छन ।
नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता राम बहादुर कार्की लेख्छन:
“शेर ब.देउवाले मोहम्मद आफतब आलमकै पक्राउलाई इंगितगरी त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हैनहोला,नहोस ! यदी होभने अब ईट्टा पोल्ने सिजन सुरु हुँदैछ,ईट्टा भट्टाको तातो चिम्निमा देउबाजीलाई एकपल्ट सेकाएर हेरौ,कस्तो हुन्छ ? हुँनत म पनी काँग्रेसकै प्राजातान्त्रिक बिचारसंग नजिक छु । तर अपराधलाई ढाकछोप र पक्षपोषण गर्ने यस्तो गैरजिम्वार अभब्यक्ति दिने नेता र बिचारको पक्षमा छैन । सच्चा देशभक्त नेपाली र काँग्रेसका ईमान्दार सुभचिन्तकहरुले देउबाको हैन काँग्रेस र देशको पक्षमा बोलौ ।
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को मतगणना जारी छ। बिहीबार राति ११ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको थियो। निर्वाचन आयुक्त शिव रिजालका अनुसार रातिदेखि अफ्रिका र ओसिएनको मतगणना जारी छ। उनका अनुसार पहिलो चरणको मतपरिणाम केही बेरमा आउने छ। आगामी दुई वर्षको नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा दुई हजार ५७० मतदाता रहेकोमा दुई हजार ३४० मत […]